Simplest Happiness Ny Sary Mihetsika Momba Ny Varotra - Famolavolana
Ny Sary Mihetsika Momba Ny Varotra
Ny Sary Mihetsika Momba Ny Varotra Ao amin'ny zodiaka shinoa ny taona 2019 dia ny taona kisoa, ka ny C C no namolavola ny kisoa voasarona, ary tonga amin'ny "sarimihetsika mafana" amin'ny fiteny sinoa izy io. Ny mpilalao sambatra dia mifanaraka amin'ny sarin'ny fantsona ary miaraka amin'ny fahatsapana finaritra izay tian'ny fantsona homena ny mpihaino azy. Ny horonan-tsary dia mitambatra singa efatra amin'ny sarimihetsika. Ireo ankizy milalao dia afaka mampiseho fahasambarana madio, ary manantena fa hanana fihetseham-po mitovy amin'izay mijery ny sarimihetsika ny mpihaino.
Anaran'ny tetikasa : Simplest Happiness, Anaran'ny mpamorona : Yen C Chen, Anaran'ny mpanjifa : Fox Movies.
Ny Sary Mihetsika Momba Ny Varotra Yen C Chen Simplest Happiness